Abaningi manje bathi izingane zesikole zanamuhla azisebenzi umsebenzi wokufundisa ofanele. Kodwa ukuze kutholakale ukusebenza kwalolu hlobo lomsebenzi, kubalulekile ukuthola ukuthi yini ngempela esiyisho ngokukhushulwa kwengane yesikole. Eqinisweni, akubona bonke abaqondisisa ngokucacile imininingwane yomsebenzi esikoleni. Iningi lezimangalo ezithathwa ngabafundisi azifanele ngempela. Nakuba kunjalo, ukuphumelela komsebenzi wezemfundo esikoleni njalo kuthonya izindinganiso izingane, ukukhetha imfundo eqhubekayo, imodeli yokuziphatha esikoleni. Ngalokho-ke, akufanele sinciphise ukubaluleka kokusebenza komsebenzi ezikoleni.
Ngakho-ke, ukuphumelela kwalolu hlobo lomsebenzi kunqunywe kanjani? Ukusebenza kahle kunqunywa yiziphi izinhloso ebekiwe futhi imiphumela yabikezelwa, nokuthi yini ngempela engayifinyelela esikhathini esithile. Ngokwemvelo, umphumela womsebenzi wezemfundo ngokuqondile uxhomeke kulokho imizamo othisha abayenzile ekufundeni nasekukhulumeni nabafundi babo. Ukulawula ukufeza lowo msebenzi, ngokuvamile, kuqhutshwa iphini likamqondisi ngomsebenzi wezemfundo. Uhlaziya futhi anqume ukuthi umsebenzi ohleliwe uphothuliwe futhi imisebenzi ethile yafezwa. Ngendlela, kufanele kuqashelwe masinyane ukuthi ayikho imingcele eyodwa yomsebenzi wezemfundo nokusebenza kwayo. Ezikoleni ezahlukene izingane ezivela emindeni ehlukene, amakilasi ahlukene kanye nesifundo esifanayo. Ngakho-ke, othisha kufanele bahlakulele ngokuzimela imigomo yabo kanye nenqubo yokusebenza, okuyinto ezoba nomthelela omuhle othonya abafundi. Izindlela ezihlukahlukene zokuthonya kwezemfundo ezinganeni zingaba yizigaba ezahlukene zesikole esifanayo. Into eyinhloko ukuthi esikoleni izingane ezineminyaka ehlukene ziqonda ukuthi zivela kubo ukuthi ziyadingeka futhi zikwazi ukwenza imisebenzi eyabelwe. Futhi, kubalulekile ukukhumbula ukuthi amandla okusebenza kahle angeke azinze. Wonke umuntu uyazi ukuthi iminyaka yobukole yisikhathi lapho ukucabanga nemibono yengane ishintsha kakhulu. Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi ngesikhathi esisodwa umthelela othile wezemfundo uzothatha ithonya elihle ekuqoqweni kwesikolo, futhi kwenye, kuyophinde inikeze umphumela omubi. Utitjhere kufanele akghone ukuzizwa nokulindela ukutjhuguluka kwethimba lezingane ukuze ashintshe amasu womsebenzi wezemfundo ngesikhathi.
Izinhlobo zokuma komphakathi
Manje ake sikhulume ngokuthi yiziphi izindlela, noma kunjalo, ungakwazi ukunquma ukukhuliswa kwengane. Cishe, kulokhu sisho amanani, imibono, izinkolelo kanye namasu abo ngabantwana. Okungcono kakhulu, ngokufanayo, ukusebenza komsebenzi wezemfundo kuphakeme. Kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko zokuma kwezenhlalakahle okumelwe zenziwe ezinganeni. Owokuqala yi-"self" orientation. Umgomo oyinhloko wenqubo yokufundisa ukwenza izingane zifune ukujabula futhi zijabule, zijabulise, kodwa zingalimazi impilo yazo. Uhlobo lwesibili luyisisekelo "sezinto". Kusho isifiso sokuba nezinto ezithandwayo, izinto zokuzilibazisa, yenza into oyikhonzile futhi uthathe isithakazelo ezintweni ezithile. Uhlobo lwesithathu lombhalo - ukugxila "kwabanye." Ingane kufanele ifise ngobuqotho ukusiza abangani bayo, bayisekele, basize ezimweni ezinzima. Ethempilini enempilo, lapho othisha bahlanganyela kahle emsebenzini wezemfundo, umthamo wonke uhambisana nalokhu ngenhla. Yiqiniso, kunezimo lapho abanye abantu bengenakuthola inqubo yezemfundo, noma kunjalo, ngendlela efanele, ngisho nezinguquko ezibonakalayo zibe ngcono.
Izindlela zokusebenza zothisha ngeqembu
Ukusebenza neqembu labafundisi kungcono ukhethe izindlela ezingabonakali njengomfundo ocacile womuntu noma ukuziphatha kahle. Izingane zidinga ukugqugquzelwa ezenzweni ezingcono, ukuchaza indlela yokwenza okulungile, kodwa ngesikhathi esifanayo, inqubo yezemfundo kufanele ihambisane nhlobo nenqubo yezemfundo kanye nenqubo yokuzibandakanya kwabafundi besikole. Isibonelo, othisha bayelulekwa ukuba benze izinto okuthiwa yizisebenzi zokuvolontiya zokufundisa izingane ukusiza abanye nokuhlanganyela empilweni yomphakathi. Kuphela, kungenjalo ungayenza imisebenzi enjalo yokugqugquzela ibe yimpoqo. Ngakho esikhundleni sokuphoqelela, udinga ukunikela. Isibonelo, ukuthumela izikhangiso esikoleni ezimenywe ukuba zihlanganyele emisebenzini ethile ehlose ukuzijabulisa, kanye nokuthuthukisa isikole. Futhi, imfundo yomuntu ishintshwe yizinga azimisele ngalo ukwenza umsebenzi ongenandaba. Kuwo wonke othisha wesikole abagula ngezikhathi ezithile, abanye abafundi banezimo ezinzima zokuphila. Umsebenzi wothisha ukuchaza izingane ukuthi kubalulekile ukusiza abanye ngokulula. Lapho izingane zivuma kangako izenzakalo ezinjalo, izinga eliphezulu lokusebenza komsebenzi esikoleni.
Ungalokothi ukhohlwe ukuthi zonke izizukulwane zezingane zanamuhla zihluke kulowo owedlule. Yingakho othisha kudingeka baqhubeke nokwandisa isisekelo sabo solwazi mayelana nomsebenzi wezemfundo. Amasu amaningi asetshenziswe eminyakeni engamashumi amabili edlule kubusha banamuhla abafanelekile ngokuphelele. Izingane nentsha zihlala ezweni elihluke ngokuphelele, elihlukile kulokho abafundisi besizukulwane esidala bakhulela khona. Ngakho-ke, akufanele neze ukhohlwe ngakho, futhi ufunde ukuzama bese uzama ubuchwepheshe obuhlukile bokuqala.
Othisha bangathinta kakhulu ukukhuliswa kwezingane. Kodwa-ke, akufanele sikhohlwe ukuthi esikoleni ingane ichitha ingxenye yesikhathi kuphela. Ngezindlela eziningi, kuthinta umphakathi, lapho ekhuluma khona ngemuva kwamakilasi. Ngakho-ke, akufanele neze abeke othisha ngomthwalo wemfanelo wokukhuliswa kwezingane. Uthisha angakwazi ukuqondisa, ukusiza, ukukhuluma nokuzama ukukholisa. Kodwa uma ingane ingenalo ithonya elihle emndenini nangaphandle kwesikole, akunakwenzeka ukuthi uthisha uzokwazi ukuthuthukisa kakhulu ukukhuliswa kwakhe.
Izinguquko kuHlelo Lokuhlanganiswa Kwezwe Ngo-2015
Indlela yokulungiselela i-USE ngaphandle kwemiphumela yomzimba
Yini esivimbela ekufundeni izilimi zakwamanye amazwe?
Indlela yokubhala i-EGE ngolimi lwesiRussia
I-Sauce esuka ku-yoghurt nekhukhamba
Isaladi nge-salmon eshisayo
Izincomo kubantu abavilapha abafuni ukugcoba
Yenkomo nge izaqathe nemifula
Ungadliwa inyama enomsoco omnandi wezinyosi nezinyamazane zezingulube
Ngalokho abantu bathandana
Kungani abantu beyeka amazwi abo?
I-autobiography yomdlali we-actress uBrithany Murphy